आज राती १२ बजेबाट काठमाडौंमा हुनेभयो लकडाउनमा भन्दा झनै कडाइ, के गर्न पाईन्छ के गर्न पाईदैँन ? हेर्नुस् विस्तृतमा – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Lockdown News/आज राती १२ बजेबाट काठमाडौंमा हुनेभयो लकडाउनमा भन्दा झनै कडाइ, के गर्न पाईन्छ के गर्न पाईदैँन ? हेर्नुस् विस्तृतमा
काठमाडौं उपत्यकामा सटडाउन गर्ने निर्णयपछि अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा बन्द हुने भएका छन् । कोरोनाभाइरसको संक्रमण बढ्न थालेपछि लकडाउनमा भन्दा झनै कडाइ गर्ने तयारी थालिएको हो । यद्यपि कडाइ सबै क्षेत्रमा भने हुने छैन । केही निश्चित क्षेत्रमा भने लकडाउनमा भन्दा कडाइ गरिनेछ ।
काठमाडौंका मुख्य बजारहरुमा लकडाउनमा भन्दा कडाइ गरिँदैछ । आज राती १२ बजेबाट काठमाडौंका मुख्य व्यापारिक क्षेत्रहरु न्यूरोड, असन, इन्द्रचोक र टेकु क्षेत्र पूरै सिल सिल गरिने भएको हो । सिल गर्दा लकडाउनमा भन्दा कडाइ गरिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र पर्यटन मान्त्रलयले जारी गरेको स्वास्थ्य सम्बन्धि मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्नेलाई कडा भन्दा कडा कारवाही हुने पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी दाहालले जानकारी दिए। उनका अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्रका ३ वटै जिल्लामा संचालित सपिङ मल, व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुमा स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना भएको वा नभएको चेकजाँच गर्ने र पालना नगरी सञ्चालन भएकालाई बन्द गर्ने सहमति भएको छ।